Degso Call of Duty: Vanguard loogu talagalay Windows
Degso Call of Duty: Vanguard
Degso Call of Duty: Vanguard,
Wicitaanka Waajibaadka: Vanguard waa ciyaar FPS ah (qofkii ugu horreeyay toogtay) oo ay soo saareen Ciyaaraha Sledgehammer ee abaalmarinta leh. Vanguard, oo ah ciyaartii 18aad ee taxanaha Wicitaanka Waajibaadka, ayaa lagu sii dayn doonaa PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S dhufaysyada bisha Nofembar 5. Marqaati ka noqo asalka ciidamada gaarka ah ee dhacdada sheekada xiisaha leh. Noqo hawl-wadeenka xoogagga gaarka ah ee ciyaarta kubbadda badan ee internetka ee adrenaline-ka qaada. Khibrad u yeelo isgoyska Zombies -ka, oo koonkiisa la ballaariyey. Si buuxda loogu dhex daray Warzone, oo ay ku jirto khariidad cusub oo la sii dayn doono dabayaaqada sanadkan.
Soo degso Wicitaanka Waajibaadka: Vanguard
Deegaankii WWII ee aadan hore u arag. Markhaati ka noqo asalka ciidammada gaarka ah ee muhiimka ah oo wax ka beddeli doona taariikhda taariikhda, sameynta koox (Task Force One) afar goobood oo waaweyn oo dagaal ah oo ku jira hab olole baan. Noqo hawlwadeenka ciidammada gaarka ah ee asalka ah ee hal-abuurka hodanka ah ee hodanka ah oo leh 20 khariidadood oo la xulan karo bilowga. U diyaargarowga isgoyska Zombies -ka oo leh koronto la ballaariyay markii ugu horreysay taxanaha. Naftaada ku dhex gal Call of Duty: Khibrad Warzone oo leh khariidad cusub oo aad u weyn. Waxaa ku shaqeeya Wicitaanka xiga ee mashiinka Duty oo lagu soo bandhigay Dagaalkii Casriga ahaa, waa Wicitaanka Duty ugu Wanaagsan: Wacitaanka Duty Vanguard weligiis.
Muuqaalka Ciyaaryahanka Kaliya: Beddel wejiga taariikhda. Khibrad u yeelo dagaalka iyada oo loo marayo sheekada isdhaafsan ee geesiyaasha caalamiga ah ee ka kooban kooxda Task Force One oo aasaaska u dhigay ciidammada gaarka ah ee la yaqaan. Waa kuwan Wicitaanka geesiyaasha Vanguard ee Duty:
Gaarka ah Lucas Riggs, Guutada 20aad, Qeybta 9 -aad ee Ciidanka Australia, Ciidanka Sideedaad ee Ingiriiska
Saajin Arthur Kingsley oo ka tirsan Guutada 9 -aad ee Baarashuudka, Ciidanka Ingiriiska
Lieutenant Wade Jackson, Scouting Squadron Six, Ciidanka Badda Mareykanka
Lieutenant Polina Petrova oo ka tirsan Qeybta 138 -aad ee Qoriga Ciidanka Cas
Afar xaraf oo la ciyaari karo ayaa u dagaallamaya inay noqdaan mid ka mid ah wakiilada tusaalaha ah ee askarta gaarka ah ee casriga ah ee u dagaallamaya guusha dagaallada baddalka badda ee adduunka oo dhan. Isu diyaari inaad qaybtaada ka qaadato sidii aad u beddeli lahayd masiirka bini-aadamka xaalad aan caadi ahayn oo ku baahsan afarta goobood ee waaweyn ee WWII ee sheeko hal cayaaryahan. La dagaallama cadaawayaasha jihooyinka Bariga iyo Galbeedka Yurub, u dagaallama adduunka xorta ah ee Baasifigga iyo Waqooyiga Afrika, ku dagaallama Jasiiradaha Midway, ku difaac Stalingrad si sax ah u toogte, dhul ku yaal Faransiiska, qarxiya ciidammada soo socda ee Waqooyiga Afrika.
Multiplayer: Khariidadaha Bilowga 20 iyo Siyaabo Badan oo Loo Ciyaari Karo - Call of Duty Vanguard wuxuu bixiyaa maalin aad u badan hal -xiddigle bilowga, oo leh 20 maabab, 16 ka mid ah oo loo dhisay ciyaarta salka, bilowga. U diyaargarow ficilka shidaalka-adrenaline oo leh Wicitaan culus oo ah Dagaal Duty markaad ka soo baxdo safka safarkaaga si aad u noqoto mid ka mid ah hawl-wadeennada ciidamada gaarka ah ee asalka ah ee deegaanno kala duwan.
Ciyaaraha Sledgehammer waxay keenaan dagaal qof-kii ugu horreeyay ee xeeladeysan oo deg deg ah waxayna ku raaxeystaan ​​siyaabo badan oo loo ciyaaro. Kuwaas waxaa ka mid ah Gunsmith-ka horumarsan iyo nidaamka Caliber oo qaata bayado is-dhexgal ah oo wax-qabad leh oo heer cusub ah, iyo nooca xiga ee 2v2 habka qoriga oo markii ugu horreysay lagu soo bandhigay Dagaalkii Casriga ahaa; Champion Hill. Bal qiyaas dhaq-dhaqaaqa, meel u dhow, dagaal koox yar halkaas oo sideed kooxood ay ku tartamayaan taxane ah oo madax-ilaa-madax ah halkaas oo kooxdii ugu dambaysay taagnayd ay guulaysanayso.
Zombies: Khibrad, waayo -aragnimo soo jiidasho leh oo uu sameeyay Treyarch - Call of Duty Vanguard wuxuu soo bandhigayaa qaabka ciyaarta Zombies -ka cusub oo ay soo saartay Treyarch Studios. Waayo -aragnimada wada -shaqayntu way sii socotaa waxayna dhexgashaa sheekada sheekada Dark Aether, iyadoo la abuurayo aragtiyo aad u xiiso badan iyadoo sidoo kale la cusboonaysiinayo ciyaar -dhiska asaasiga ah ee moodku caan ku yahay. Baadh argagaxyada aan la sheegi karin ee ay hormuudka ka yihiin Zombies -ka Dagaalkii Qaboobaa ee Black Ops markii aad iska ilaaliso weerarada aan kala joogsiga lahayn ee dhintay ee socda.
Wicitaanka Waajibaadka: Vanguard waxaa ku shaqeeya mashiinka jiilka soo socda ee ugu horreeya ee lagu soo bandhigay Wicitaanka Duty: Dagaalkii Casriga ahaa, oo la hagaajiyay si loo bixiyo daacadnimo muuqaal oo aad u wanaagsan, adduunyo-sawir, jilayaal dhab ah iyo waxqabadka garaafyada dhex-dhexaadka ah ee hagaajinaya ciyaarta. Call of Duty: Vanguard waa waayo-aragnimada Wicitaanka Duty ee ugu horumarsan abid, oo leh is-dhexgalka Warzone, ciyaar-is-dhaafsi, hor-u-socod, iyo taageero jiil oo ka bixitaan ah.
Call of Duty: Vanguard Noocyada
Horumar: Sledgehammer Games